नर्सिङ Archives – healthykhabar.com
काठमाडौँ, १४ मंसिर । नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण सुरु भएयता पाँच हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित भइसकेका छन् । तीमध्ये १३ जना स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भइसकेको छ । त्यसमा पाँच जना चिकित्सकको कोरोनाका कारण मृत्यु भयो । कोरोना सङ्क्रमित हुनेमा वरिष्ठ चिकित्सकदेखि नर्र्स, स्वास्थ्यकर्मी छन् । कतिपय चिकित्सक कोरोना सङ्क्रमण भएपछि जटिल स्थितिमा पुगेर आईसीयू तथा भेन्टिलेटरमा उपचारपछि निको भए । पुनः काममा फर्किएर बिरामीको जीवन बचाउन लागिरहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीलाई गत कात्तिक ६ गते कोरोना पुष्टि भएको थियो । कोरोनालाई परास्त गरी उहाँ यतिखेर मन्त्रालयको नियमित काममा फर्किसक्नुभएको छ । दशैँको मुखमा कोरोना सङ्क्रमित भएपछि उहाँलाई दशैँको रौनक भएन । केही खाएको स्वाद तथा गन्धसमेत थाहा हँुदैनथ्यो । सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले दशँैमा आफैले टीका लगाउनुभएको थियो । आमाबुबाले मुछेर कोठाको कुनामा राखिदिएको टीका आफैले लगाउनुपरेको खल्लो अनुभव छ डा. अधिकारीसँग । कोरोना सङ्क्रमित भएको १४ दिनपछि उहाँ पुनः कोरोना परीक्षण नगरी काममा जानुभयो…
चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षामा ७३ प्रतिशत उत्तीर्ण
काठमाडौं,१३ मंसिर । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिएको विशेषज्ञ चिकित्सकको दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा ७३.३ प्रतिशत उत्तिण भएका छन् । काउन्सिलले कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा लिएको थियो । काउन्सिलले शुक्रबार र शनिबार पाँच चरणमा लिएको परीक्षामा ७३.३ प्रतिशत चिकित्सक पास भएका हुन् । परीक्षामा ८३९ जना सहभागि भएका थिए ती मध्ये ६१५ जना उत्तीर्ण भएका छन्। कुल सहभागिमध्ये २२४ जना अनुतिर्ण, ४ जना अनुपस्थित र १ जनाको परीक्षा स्थगित गरिएको काउन्सिलले जनाएको छ।
काठमाडौँ, १३ मंसिर । शनिबार लिइएको नेपाल नर्सिङ परिषद्आको दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा ४९ प्रतिशत पास भएका छन् । परीक्षामा नर्सिङ तर्फ ४९.२९ प्रतिशत र मिडवाइफ्रि तर्फ ६६.६६ प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका हुन् । परिषदका अनुसार परीक्षामा नर्सिङ तर्फ १ हजार २७० जना सहभागी थिए । त्यसमध्ये ६२६ जना उत्तीर्ण भएका छन् । यस्तै ६४४ जना अनुत्तीर्ण भएका छन् । यस्तै मिडवाइफफ्रि तर्फ ६ जनाले जाँच दिएकामा ४ जना उत्तीर्ण भएका छन् । नियमित तालिका अनुसार गत असारमा हुनुपर्ने लाइसेन्स परीक्षा कोरोना महामारीका कारण हुन सकेको थिएन ।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि ६६ करोड ८७ लाख जोखिम भत्ता निकासा, तत्काल भत्ता दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौँ, १२ मङ्सिर । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जोखिम भत्ता बापत कुल ६६ करोड ८७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ कोरोना उपचार गराइरहेका विभिन्न अस्पतालहरुलाई निकासा पठाइसकेको छ । उपचार खर्च समेत गरी असोज मसान्त सम्मको भत्ता पठाइसकेको र कात्तिक महिनाको पठाउने तयारीमा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल जोखिम भत्ता दिन निर्देशन समेत दिएृको छ । मन्त्रालयले आज सूचना जारी गर्दै कोरोना परीक्षण र उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको जोखिम भत्ता दिन सम्बन्धित अस्पतालहरुलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले असोज मसान्त सम्मको रकम निकासा भई अस्पतालहरुमा गईसकेकोले जोखिम भत्ता नियमित रुपमा दिन ती अस्पतालहरुालाइ निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले जोखिम भत्ता सम्बन्धि व्यवस्थामा अलमलमा नपर्न सरोकारवालाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले असोज मसान्तसम्मको जोखिम भत्ता र कोभिड १९ का बिरामीको उपचार गरेका अस्पतालहरुलाई प्रतिदिनका दरले उपचार खर्च समेत गरी कुल ६६ करोड ८७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ पठाइसकिएको भन्दै कात्तिक महिनाको रकम…
कोरोना संक्रमणबाट डा. ध्रुब मुडभरीको निधन
काठमाडौं,६ मंसिर । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट डा. ध्रुब शर्मा मुडभरीको निधन भएको छ । शनिबार चावहिलस्थित ओम अस्पतालमा डा. मुडवरीको निधन भएको हो। अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक बाबुकाजी कार्कीले डा.मुडभरीको कोरोना बाट निधन भएको प्रष्ट पार्नुभयो। शल्य चिकित्सक डा. मुडभरीलाई २७ कात्तिकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उहाँलाई श्वासप्रश्वासको समस्या देखिएको थियो । करिव ७ दिन अस्पतालमा उपचारपश्चात डिस्चार्ज भइ पुन श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि ३ मंसिरमा अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उपचारको क्रममा शनिबार उहाँको मृत्यु भएको हो । डा. मुडभरी ॐ अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।
एकैदिन २६ जना संक्रमितको मृत्यु, मृतकको संख्या ७९१ पुग्यो
काठमाडौं,५ कात्तिक । नेपालमा एकै दिन २६ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या ७९१ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले गत २४ घण्टामा ५ हजार ७ सय ४३ जना जना भेटिएसँगै संक्रमितको संख्या १ लाख ४४ हजार ८ सय ७२ पुगेको जानकारी दिनुभयो । कुल संक्रमितमध्ये ४४ हजार ४ सय ७६ जना सक्रिय संक्रमित छन्। कोरोनाको आशंकामा गत २४ घण्टामा २० हजार १ सय १८ जनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ। यो सँगै पिसिआर परीक्षण हुनेको संख्या १३ लाख ३४ हजार ८ सय ९७ पुगेको छ। हाल ४ हजार ६५ जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नर्सिङ विधार्थीको लाइसेन्स परीक्षाकेन्द्र काठमाडौंमा मात्रै
काठमाडौं,२ कार्तिक । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) को परिक्षा केन्द्र काठमाडौंमा मात्र हुने भएको छ। आगामी मंसिर १३ गते लाइसेन्स परिक्षा हुँदैछ। काउन्सिलले यसअघि प्रदेशगत रुपमा लाइसेन्स परीक्षा केन्द्र तोकी परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारले यातायातका साधन सुचारु गरेपछि काउन्सिलले काठमाडौंमा मात्र परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रविणता प्रमाणपत्र तह (पिसिएल), बिएससी नर्सिङ र नेसनल लाइसेनिङ एक्जामिनेसनमा सहभागी हुने विद्यार्थीले व्याचलर इन मिडवाइफरी साइन्स उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने काउन्सिलले जनाएको छ। काउन्सिलले असोज ४ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म परीक्षामा सहभागी हुन अनलाइन फारम भर्नुपर्ने म्याद तोकेको छ। अनलाइन फारम exam.nnc.org.np मा गई भर्न सकिने छ। सो मितिमा परीक्षा फारम भर्न छुटेका विद्यार्थीले दोब्बर दस्तुर तितेर कात्तिक ४ गतेदेखि १५ गतेसम्म फारम भर्न सक्ने काउन्सिलले जनाएको छ। परीक्षामा तीन हजार परीक्षार्थी सहभागी हुनेछन् ।
काठमाडौं,२ कार्तिक । कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा पहिलो पटक नर्सको मृत्यु भएको छ। नेपाल नर्सिङ संघको आजीवन सदस्य विधा जोशीको ७० बर्षको उमेरमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। नेपाल नर्सिङ संघकि कोषाध्यक्ष तथा प्रवक्ता कल्पना श्रेष्ठले शुक्रबार पाटन अस्पतालमा उपचारको क्रममा जोशीको मृत्यु भएको बताउनुभयो ।जोशी रिटायर हुनुभन्दा अगाडी वीर अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।
कान्तिबाल अस्पतालमा अन्र्तराष्ट्रियस्तरको अनुसन्धान हुने,स्वास्थ्य परिषद र अस्पतालबीच चार बुँदे सम्झौता
काठमाडौँ, १ कात्तिक । कान्ति बाल अस्पताल र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदबीच चार बुँदे सम्झौता भएको छ । अस्पताललाई बालरोग सम्वन्धी उत्कृष्ठ अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्नका लागि परिषद र अस्पतालबीच चार बुँदे सम्झौँता भएको हो । कान्ति अस्पतलका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले अस्पतालमा बालरोग सम्बन्धि अनुसन्धान सुरु गर्ने विषयमा तिहारपछि सम्झौता अनुसार अस्पतालले काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले कान्तिमा अन्र्तराष्ट्रियस्तरको अनुसन्धान सुरु हुने बताउनुभयो । उहाँले अनुसन्धानका लागि मापदण्ड बनाउने, आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने, अनुसन्धानका क्षेत्र पहिचान गर्ने, संयुक्त रुपमा अनुसन्धान तथा समन्वय गर्ने विषयमा सम्झौता भएको जानकारी दिनुभयो । सम्झौँतामा अस्पतालका तर्फबाट निर्देशक डा कृष्णप्रसाद पौडेल र परिषद्का तर्फबाट कार्यकारी सदस्यसचिव डा प्रदीप ज्ञवालीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा डाक्टर, नर्स सहित ६४ वटा दरवन्दीमा विज्ञापन
काठमाडौं,२८ असोज । लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगले मेडिकल अधिकृत, नर्सिङ, फिजयोथेरापिष्ट र ल्याब टेक्नोलोजिष्ट गरी ६४ दरवन्दीमा आवेदन खुला गरेको छ। प्रादेशिक आयोगले गोरखापत्र दैनिकमा आज सूचना जारी गर्दै मेडिकल अधिकृतमा ४९, नर्सिङ अधिकृतमा ७, फिजियोथेरापिष्ट ३ र मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्टमा ५ वटा दरबन्दीमा आवेदन खुला गरेको हो। आयोगले कार्तिक १८ गतेसम्म दरखास्त हाल्न भनेको छ। आठौं र सातौं तहका लागि आयोगले लिखित, सामुहिक छलफल र अन्तर्वार्ताबाट परीक्षा लिने छ। हेरौं सूचना
कान्ति बाल अस्पतालमा ३५ नर्स र २० जना डाक्टरलाई रोजगारीको अवसर
काठमाडौं । महाराजगन्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालमा ३५ जना स्टाफ नर्स र २० जना मेडिकल अधिकृतसहित ५५ जनाको लागि करार सेवामा दरखास्त आह्वान गरेको छ। अस्पतालले सघन उपचार कक्ष विस्तारका लागि करारमा नर्स र डाक्टर नियुक्त गर्न लागेको हो । १५ दिनभित्र दरखास्त पेस गर्न मिति दिइएको छ । हेरौं सूचना:
बागमती प्रदेशमा २३७ जना विद्यालय नर्स आवस्यक
काठमाडौ्र,८ असोज । बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश भरीका स्थानीय निकायमा दुईजनाको दरले २३७ जना नर्स माग गरेको छ । ती बाहेक एक जना विद्यालय नर्स नर्सिङ्क अधिकृत एकजना माग भएको छ । त्यसको लागि असोज २८ गतेसम्म दरखास्त दिन सक्नेछन् । हेरौं वागमती प्रदेशले निकालेको सूचनाः
नर्सको लाइसेन्स परीक्षा मंसिरमा (सूचना सहित)
काठमाडौँ, २ असोज ः नर्सको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को परीक्षा आगामी मंसिर १३ गते संचालन हुने भएको छ । नेपाल नर्सिङ परिषदले मंसिर १३ गते नाम दर्ता (नर्सिङ लाइसेन्स परीक्षा) गर्ने भएको छ। परिषदले आज सूचना जारी गर्दै परिक्षा मंसिर १३ गते संचालन गर्ने जानकारी दिएको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले परीक्षाका लागि अनुमति दिएपछि परिषद्ले लाइसेन्स परीक्षाको मिति सार्वजनिक गरेको हो । परिक्षामा सहभागी हुनका लागि असोज ४ गते देखि कार्तिक ३ गते सम्म फाराम भरिसक्नुपर्नेछ।
कोरोना महामारी बीच नर्सिङ लाईसेन्स परीक्षा हुने
काठमाडौ,२९ भदौ । कोरोना महामारीका बीच नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) परीक्षा गर्न लागेको छ । यसअघि असारमा हुनुपर्ने परीक्षा कोरोनाको कारण स्थगित भएको थियो । नेपाल नर्सिङ काउन्सिन्लकी रजिष्ट्रार विन्दा घिमिरेले कोरोनाको कारण गत असारमा हुनुपर्ने लाइसेन्स परीक्षा कोरोनाको कारण रोकिएकोमा अब छिटै गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । नर्सिङ लाईसेन्स परीक्षा प्रत्येक ६–६ महिनामा हुने गर्दछ । रजिष्ट्रार घिमिरेले काउन्सिलले केही दिनमै फारमका लागि सूचना जारी गर्ने र त्यहि अनुसार प्रदेश अनुसार विद्यार्थी संख्याको आधारमा परीक्षा हुने बताउनुभयो । सयभन्दा कम विद्यार्थी भएको प्रदेशका विद्यार्थीलाई नजिक पायक पर्ने परीक्षा केन्द्रमा व्यवस्था गर्ने तयारी काउन्सिलको छ। यसपटक देशभरबाट चार हजार परीक्षार्थी लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ।
दुई हजार जना कोभिड १९ को लागि स्वयमसेवा गर्न इच्छुक
काठमाडौँ, २६ भदौ । कोभिड १९ को रोकथाम र उपचारका लागि करिव दुई हजार स्वास्थ्यकर्मी स्वमसेवक गर्न इच्छा देखाएका छन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केही दिन अघि स्वयसेवकका लागि आवेदन माग गरेकोमा एक हजार ९३५ जना स्वास्थ्यकर्मीले कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रण गर्न ईच्छुक देखाउदै आवेदन फाराम भरेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ति आवेदन फारम भरेका स्वयसेवकलाई उनीहरुले रोजेको ठाउँमा गई अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको आइसोलेसन तथा क्यारेन्टिनमा रहेका विरामीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने छन । मन्त्रालयले ईच्छुक चिकित्सक, नर्स, प्यारमेडिक्स लगायत स्वास्थ्यकर्मी र सेनानिवृत स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वयसेवकको रुपमा काम गरी कोभिड १९ को नियन्त्रण गर्न आवहन गरेको थियो । ति स्वयसेवकलाई आफूले स्वयसेवा गर्न चाहेको जिल्ला, स्थानीय तह र स्थानको आवश्यकता र माग बमोजिम खटाइने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले बताए ।
कोरोना सङ्क्रमण र दुव्र्यवहारसँग जुध्दै स्वास्थ्यकर्मी
काठमाडौँ, २३भदौ। नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीको चपेटामा अग्रपङ्क्तिमा खटिएर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी परेका छन् । कोरोना उपचार हुने प्रत्येक अस्पतालमा कार्यरत दर्जनाँै स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित छन् । ती अस्पतालमा कार्यरत अस्पताल निर्देशकदेखि, स्टाफ नर्स, चिकित्सक, ल्याबमा कार्यरत कर्मचारी, सरसफाइ कर्मचारीदेखि प्रशासन सम्मका कर्मचारीलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भइरहेको छ । वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, भरतपुर अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोसी अस्पताल, भेरी अस्पताल लगायतका अस्पतालमा कार्यरत सयौँ स्वास्थ्यकर्मी यतिखेर आइसोलेसनमा उपचाररत छन् । कतिपय चिकित्सक तथा नर्स निको भएर काममा फर्किसकेका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख तथा कोसी कोभिड अस्पताल व्यवस्थापन प्रमुख ज्ञानबहादुर बस्नेत पनि २६ दिनको आइसोलेसन बसाइपछि कोरोनालाई जितेर नियमित काममा फर्कनुभएको छ । उहाँ आइसोलेसनमा हुँदा पनि नियमित रूपमा मोरङ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख भएको हुनाले सयाँै फोन आउने र जिल्लाभरका सङ्क्रमितको व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने हुन्थ्यो । स्थानीय तहमा कोरोना परीक्षणदेखि उपचार सम्मको व्यवस्था बस्नेतले नै गर्नुपर्दथ्यो । उहाँले कोरोनालाई जित्न उच्च…
नर्सिङ निरीक्षक देवकोटा एकलाख नगद सहित उत्कृष्ठ कर्मचारीबाट पुरस्कृत
काठमाडौँ, २२ भदौ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको आइसीयू इन्चार्ज तथा अस्पताल नर्सिङ निरीक्षक उषादेवी देवकोटाले यसबर्षको उत्कृष्ठ निजामती कर्मचारी पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। सरकारले उहाँलाई एक लाख रुपैयाँ रासि सहित उक्त पुरस्कार प्रदान गर्नेछ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा दिवसको अवसरमा नर्सिङ निरीक्षक देवकोटालाई पनि उत्कृष्ठ निजामती कर्मचारी घोषणा गरेको हो। यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले यसबर्षको निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई ५० हजार रुपैयाँ रासीको पुरस्कार दिइनेछ। संघीय मन्त्रालयले १७ औँ निजामती सेवा दिवसको अवसरमा मन्त्रालयले १० जना कर्मचारीलाई उत्कृष्ठ निजामती कर्मचारीलाई पुरस्कार र ३० जनालाई निजामती सेवा पुरस्कारबाट विभुसित गरेको छ ।
दुई नर्स सहित गण्डकी प्रदेशमा थपिए ६७ जना संक्रमित
काठमाडौं,२२ भदौ । गण्डकी प्रदेशमा ६७ जना संक्रमित थपिएका छन् । गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय पोखराका अनुसार आज थपिएका संक्रमित हरुमा गोरखाका १८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। ती मध्ये गोरखा नगरपालिकामा १६ जना छन् भने पालुङटार नगरपालिकामा २ जना संक्रमित थपिएका छन् । यस्तै आज मात्रै नवलपरासी, कास्की, तनहुँ र गोरखा गरि थप ६८ जना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराले जनाएको छ । यस्तै पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पतालमा कार्यरत २ जना नर्समा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ।
नर्सिङ पढेर के गर्छौ रे !
काठमाडौं । आखीर पिआरवाला अंकल सँग विवाह गर्छौं रे । आमा बाबालाई समेत भनेका रैछन् ती कुसोच भएका मान्छेहरूले, एकदिन पोइला हिड्ने छोरीको लागि किन यत्रो पैसा खर्च गर्छौ रे । बिपी कप र थर्मोमिटर बोकी डाक्टरको पछि पछी पर्छौ रे । खुलेर कुरा गर्यो भने झर्किने गर्छौ रे विरामीको दिसापिसाब लगायत सबै केएर गर्दा पनि कति सजीलै भन्छन स्टेशनमा बसेर के गर्छौ रे ? निस्कीहाल हाम्रो टोल बाट कोरोना सार्छौं रे, उल्टै कोरोना सारेर देश लाई भयानक पार्छौ रे । अरु व्यक्तिबाट त कोरोना नसार्ने जस्तो कुरा गरेर भन्छन, तिमीहरूले कोरोना सारेर हाम्रो स्वास्थ्य बिगार्छौं रे। भोको पेटमा काम गर्दा पनि टार्छौ रे, औषधी दिन नजानेर बिरामी मार्छौ रे । कहाँ सम्मको सोच राखेर भन्दा रैछन् हामीलाई, विरामीको औषधी चोरेर आफू राख्छौ रे । केही कुरा सोध्यो भने झर्कने गर्छौ रे, नबोली बस्यो भने एट्टीच्युड देखाउँछौ रे । आफ्नो विरामीको बेड…